4 qof oo ku dhaawacmay dibad-bax maanta ka dhacay magaalada Laascaanood, Sool. – Radio Daljir
Laascaanood, March, 07 ? Inta la hubo 4 qof ayaa dhaawacmay, tiro kale oo dad ahna waa la xir-xiray., kaddib markii dad shacab ah ay sameeyeen dibad-bax ay ku taageerayaan war ku saabsan aqoonsiga DFKS ee maamul-gobolleedka Khaatumo State of Soomaaliya kaasi oo dhawaan looga dhawaaqay degmada Taleex ee gobolka Sool.
Wariye madax-bannaan oo ka gaabsaday magaciisa in la xuso kuna sugan Laascaanood ayaa Radio Daljir u sheegay in dhaawacyada soo gaaray shacabka ay ka dambaysay kaddib markii ciidamada booliska ay rasaas ku fureen shacabkii bannaan-baxa waday, waxaana uu hadalkiisa raaciyay in galabtay 04:00pm galabnimo guud ahaanba bandaw lagu soo rogay magaalada oo dhan.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ah mid xakiran caawa, waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in dad kor u dhaafaya illaa 40 qof lagu xir-xiray saldhigyada magaaladda, kaddib markii ciidanka bilaysku ay gacanta kusoo dhigeen.
Bannaanbaxyda sababa dhaawacyada dadka shacabka ah soo gaara ayaa ah arrin kusoo noq-noqotay marar badan magaaladda Laascaanood, waxaana dadka shacabka ah ee degmadaasi ku nool had iyo goor ay kasoo horjeedaan aragtida maamulka gacanta ku haya magaaladaasi.